Home » Lahatsoratra farany farany » culinary » Ireo no tanàna 2021 Sakafo tsara indrindra any Amerika
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Kolontsaina • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • fiantsenana • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Divay & Fanahy
Post-COVID-19, trano fisakafoanana sasantsasany toa manandrana misintona ny mpanjifa miverina amin'ny alàlan'ny fanolorana safidy fifaliana mandritra ny ora lehibe sy mahafinaritra amin'ny tena vidiny mirary. Ny foodies amin'ny teti-bola tery dia tokony hijery ireo menio ora mahafinaritra amin'ny trano fisakafoanana sasany ankafiziny.
Maherin'ny 180 amin'ireo tanàn-dehibe amerikana lehibe indrindra no nampitahaina tamin'ireo metrika manan-danja sivy amby roapolo.
Ny tahirin-kevitra dia manomboka amin'ny fahafaha-miditra sy ny fidirana amin'ny trano fisakafoanana avo lenta ka hatramin'ny fetin'ny sakafo isaky ny capita ka hatramin'ny mpamokatra labiera sy famokarana divay isaky ny olona.
Atosiky ny torolàlana momba ny areti-mandringana, ny orinasa maro hafa koa dia nifindra tany amin'ny faritra ivelany, izay misy ny toerana kely kokoa sy akaiky kokoa ary ny famandrihana tsy misy fifandraisana.
Miaraka amin'ny 16 Oktobra Sakafo manerantany Day sy ny vidin'ny trano fisakafoanana nisondrotra 5.4% teo anelanelan'ny Jolay 2020 sy Jolay 2021, namoaka ny tatitra momba ny 2021's Best Foodie Cities any Amerika ireo mpandinika indostrialy ary koa ny fanehoan-kevitr'ireo manam-pahaizana.
Mba hamaritana ny seho fisakafoanana ara-tsakafo tsara indrindra sy mora indrindra eto an-toerana, dia nampitahain'ny manam-pahaizana mihoatra ny 180 amin'ireo tanàna lehibe indrindra amerikana manerana ny mari-pahaizana 29 lehibe. Ny tahirin-kevitra dia manomboka amin'ny fahafaha-mividy sy ny fahazoana miditra amin'ny trano fisakafoanana avo lenta ka hatramin'ny fetin'ny sakafo isaky ny capita ka hatramin'ny mpamokatra labiera sy famokarana divay isaky ny olona.
Tanàn-dehibe 20 fihinana sakafo any Amerika
1. Portland, NY 11. Los Angeles, CA
Orlando, Florida, no manana ny fivarotana sakafo be mpahazo gourmet indrindra (isaky ny faka iray an'ny mponina), 0.4529, izay 19.4 heny noho ny any Pearl City, Hawaii, ilay tanàna misy vitsy indrindra amin'ny 0.0234.
Orlando, Florida, no manana trano fisakafoanana betsaka indrindra (isaky ny fotony velarantany), 7.23, izay 18.1 heny noho ny any Pearl City, Hawaii, tanàna misy 0.40 vitsy indrindra.
Orlando, Florida, no manana ny fivarotana gilasy sy yaourt be indrindra (isaky ny faka iray an'ny mponina), 0.3566, izay 49.5 heny noho ny any South Burlington, Vermont, ilay tanàna misy 0.0072 ny vitsy an'isa.
Santa Rosa, Kalifornia, no manana ny tahan'ny trano fisakafoanana feno fanompoana amin'ny toeram-pisakafoanana haingana, 1.72, izay avo 3.2 heny noho ny any Jackson, Mississippi, tanàna misy 0.54 ambany indrindra.
Sakafo tsy misy ronono vaovao: Miorina amin'ny microalgae voalohany